Top 23 Địa Điểm Du Lịch Vĩnh Long Khiến Du Khách Quên Lối Về | Excitinghochiminhcity - Excitinghochiminhcity.Vn
Top 23 Địa Điểm Du Lịch Vĩnh Long Khiến Du Khách Quên Lối Về | Excitinghochiminhcity
Kwekuenda kupi kuVinh Long – Kumadokero kwerwizi? Ngati Danangaz kuongorora 23 Vinh Long nzvimbo yevashanyi haifanirwe kufuratirwa!
>>> Ona zvimwe:
1 1. Vinh Long Cathedral – Vinh Long nzvimbo yevashanyi
2 2. Vinh Long Square – Vinh Long nzvimbo yevashanyi
3 3. Mwanakomana Thang Zen Monastery – Vinh Long Travel
4 4. Ngoc Vien Tinh Xa – Vinh Long Spiritual Tourism
5 5. Vinh Long Provincial Museum – Vinh Long nzvimbo yevashanyi
6 6. PaTemberi Iyo, Vinh Long Tembere – Vinh Long nzvimbo yevashanyi
7 7. Muchero webindu 6 matani – Vinh Long Tourist Site
8 8. Cai Cuong Imba Yakare – Vinh Long Sightseeing Place
9 9. Zvisaririra zve Huu Thanh Long Ho Gate
10 10. Temberi yaPham Hung.
11 11. Ibwe bindu remagwaro echiBuddha
12 12. Vinh Sang nzvimbo yevashanyi – Vinh Long nzvimbo yevashanyi
13 13. Tra Pamusika Unoyerera – Vinh Nzvimbo Yakareba Yekuenda
14 14. My Thuan Bridge – Vinh Long Sightseeing Place
15 15. Tembere yeMabhuku – Vinh Long Spiritual Tourist Site
16 16. Vinh Long imba yekare ecological nzvimbo
17 17. An Binh Island – Vinh Long Nzvimbo yekuenda
18 18. Truong Huy nzvimbo yevashanyi
19 19. Yakareba An Ancient Pagoda – Vinh Long Tourist Site
20 20. Tien Chau Pagoda – Vinh Long Spiritual Tourism
21 21. Long Thanh Communal House – Nzvimbo Yekushanyira Vinh Long
1. Vinh Long Cathedral – Vinh Long nzvimbo yevashanyi
Vinh Long Cathedral mufananidzo unozivikanwa weVinh Long people. Zvisinei, kunewo vanhu vashoma vane simba vanochengeta chitendero, saVaTran Van Trieu, vanobva kuCai Nhum. Nemhaka yokuti akanga akakodzera kutsigira Mambo Gia Long munguva yevapoteri, paakagara pachigaro choumambo, mambo akamupa mubayiro wokuva gavhuna weVinh Long. Iyi inzvimbo yekushanya muVinh Long iyo isingafanirwe kupotsa!
>>> Ongorora: [Top 6] Dana ne5 Star Hoi An Hotels ine Maonero Akanaka
Vinh Long Cathedral Church
2. Vinh Long Square – Vinh Long nzvimbo yevashanyi
Vinh Long Square iri pamativi mana anoganhurana nemigwagwa ina muguta. Iyi kazhinji ndiyo nzvimbo inoitirwa mitambo muguta. Uye zvirongwa zvezviitwa zvemubatanidzwa pamwe nehunyanzvi hwevanhu pazororo uye Tet. Iine kampasi yakakura uye ine mhepo ine miti yakawanda yakasvibira yakatenderedza, rimwe divi irwizi rwune mhepo. Iyo sikweya inzvimbo zvakare inosarudzwa nevagari venzvimbo kurovedza muviri uye kufamba-famba.
>>> Ongorora: Epamusoro makumi matatu eVashanyi anokwezva muCa Mau, Huu Tinh Rwizi
Vinh Long Square
>>> Tarisa ikozvino: Kuzivisa Yepamusoro gumi neshanu Soc Trang Yekushanyira Nzvimbo dzausingafanire Kupotsa
3. Mwanakomana Thang Zen Monastery – Vinh Long Travel
Gedhi retemberi rakavakwa rakareba uye rakafara, zvichiita kuti pave nechitarisiko chinoremekedzeka kubva nechokunze chakatarisa mukati. Kupinda mutemberi, kune maruva akawanda uye miti yekushongedza. Kuve munzvimbo yakatenderedza kunonzwa kutonhorera, uye kugadzikana zvakanyanya. Temberi inzvimbowo yokudzidzisa. Nekuti ichi zvakare chiBuddha chepakati chikoro. Kana iwe uine mukana wekuuya kuVinh Long kuzotamba, iwe unofanirwawo kuuya pano!
Mwanakomana Thang Zen Monastery
4. Ngoc Vien Tinh Xa – Vinh Long Spiritual Tourism
Ngoc Vien Vihara ndiyo yekutanga mendican monastery muVietnam. Yakavakwa mukupera kwa1948 panzvimbo yakakura muVinh Long dhorobha. Parizvino, KuCommunal House inozivikanwa senzvimbo inoyevedza yenyika yeSouth West. Zvechokwadi, kusati kwave nekukura kwenhamba yemamongi uye kuumbwa kwezvivako zvakakura. Parizvino, Venerable Ungano I kunyanya uye boka reMendicant rose zvaro. Gara uchirangarira kunaka kwekurera kwaPatriaki, akavhenekerwa. Uye ndiye akagadza chigaro chemadzibaba ichi.
Ngoc Vien Tinh Xa
5. Vinh Long Provincial Museum – Vinh Long nzvimbo yevashanyi
Vinh Long Museum iri pakati peguta, padyo nemusika, padyo neCuu Long hotera. Munzvimbo yemumyuziyamu, kune miti yakawanda yekare yakazivikanwa se “Vietnamese nhoroondo uye tsika relic miti”. Kusanganisa nedzimba dzekuratidzira kugadzira yekare, yakavhurika uye ine mimvuri yakazara nzvimbo. Guta rakanaka kwazvo muVinh Long. Yakava nzvimbo yekuvaraidza uye zviitiko zvenharaunda. Ichi chinokwezva veruzhinji kutsvaga, kudzidza, kuona nzvimbo, kushanya.
>>> Tsvaga World Travel HERE
6. PaTemberi Iyo, Vinh Long Tembere – Vinh Long nzvimbo yevashanyi
Iyo Phu Tembere (kana Ong Pagoda) inodzokera kuNguyen Dynasty. Iri ipurojekiti yakasarudzika ine Chinese architecture. Denga rakafukidzwa nematiles eyin neyang, makona mana akakombama. Mukati mune mbiru dzakagadzirwa nematanda anokosha, akapendwa nevermilion, akavezwa nounyanzvi. Tembere yekunamatira Quan Thanh De Quan, Thien Hau Thanh Mau… Uye maBuddha Quan Am, Buddha Shakyamuni… Vinh Long nzvimbo yevashanyi haifanire kuipotsa!
7. Muchero webindu 6 matani – Vinh Long Tourist Site
Iwe unogona kutamba wakasununguka, kuyemura nzvimbo uye kunyanya mutengo wekuona uye kudya pano wakachipa. Pano unogona kuhaya ba ba shirt, kushandisa maturusi kurova hove, vermicelli, bepa remupunga, tamarind muto, iced tii, magwavha kuti udye wakasununguka mubindu. Kunyanya, gadzirira chikafu chakakosha chebindu nendiro dzakawanda dzinonaka senge hove yakagochwa yenyoka, huku, hove, mapakeke…
Muchero Bindu 6 Matani
>>> Usakanganwa: Zorora NeTop 10 Inotonhorera Saigon Garden Coffee Shops
8. Cai Cuong Imba Yakare – Vinh Long Sightseeing Place
Imba iyi yakasarudzika musanganiswa weVietnamese uye French architecture. Kunze kwechivakwa cheFrance, mukati meiyo yechinyakare matanda chimiro, iyo spire, iyo facade uye pasi zvakamisikidzwa nesamende mataira. Musoro wembiru wakaoma, makoramu ekoridho anogadzira chimiro chekare che “masuwo matatu nembiru ina”. Imwe neimwe imba inosanganiswa nearched arch, iri nyore “hyacinth” handrail. Iyi inzvimbo inokwezva nhamba huru yevashanyi pavanouya kuVinh Long.
Cai Cuong Imba yekare
9. Zvisaririra zve Huu Thanh Long Ho Gate
Munzvimbo ine ruzha, yakabatikana yeVinh Long pakati peguta. Nekushaikwa kwemiti yakasvibirira, kuvapo kwemuti iwoyo kwatova chinhu chinonakidza, saka vanhu vari pano vanokoshesa. Huu mukova wemuti wematehwe sechinhu chinonyanya kukosha muVinh Long guta. Iyi saiti ine mukurumbira yenhoroondo inosanganiswawo nenyaya dzakawanda dzisinganzwisisike. Vinh Long citadel – inzvimbo yenhoroondo yakakodzera kushanyirwa kana vashanyi vaine mukana wekudzokera kunyika yeVinh Long nezvikwereti zvakawanda.
Huu Thanh Long Ho
10. Temberi yaPham Hung.
Nzvimbo yekurangarira yakanonoka Mutungamiri Pham Hung, inozivikanwawo neVinh Long vanhu vane zita rinodikanwa Pham Hung Tembere, yakavakwa muLong Phuoc commune, Long Ho mudunhu, Vinh Long mudunhu. Temberi yakakura ine chivakwa chechechi uye chivakwa chinoshanda kumashure kwayo, ine chivako chikuru chekuratidzira pane zvigadzirwa zvaishandiswa neMutungamiri Pham Hung. Pamusoro pezvo, Tembere zvakare ine imba yemabhaisikopo nezvehupenyu hwake nebasa rekuchinja. Naizvozvo, kana iwe uine mukana wekuuya kuVinh Long, ino inzvimbo yaunofanira kushanyira nekuti uku ndiko kudada kwevanhu pano.
Vinh Long Tembere
11. Ibwe bindu remagwaro echiBuddha
Pakuuya kuno, vashanyi vazhinji vanouya pano vachifara kwazvo. Sokurasika kana gadheni rakashongedzwa nematombo akanaka kwazvo, ane hunyanzvi hwepamusoro kukosha. Nzvimbo iyi yakatanga kukwezva vashanyi vazhinji kuti vauye kuno kuzonamata. Nakidzwa nemabasa emifananidzo yedombo pakati chaipo peRwizi rweMekong.
Stone Garden yeBuddhist Sutras
12. Vinh Sang nzvimbo yevashanyi – Vinh Long nzvimbo yevashanyi
Vinh Sang eco-tourism nzvimbo, Vinh Long inzvimbo ine mukurumbira muSouth nhasi. Kana vachiuya pano, vashanyi vanogona kuona zvakawanda zvekuvaraidza zviitiko kana chikafu. Iyi inzvimbo yekushanya muVinh Long iyo isingafanirwe kupotsa!
>>> Verenga Iyezvino: Ziva Dzese Dzakanaka Nzvimbo dzeVashanyi dzekuMadokero Dzinokwezva Vashanyi
13. Tra Pamusika Unoyerera – Vinh Nzvimbo Yakareba Yekuenda
Iyi ndiyo misika yekupedzisira inoyangarara paRwizi Hau isati yadurura mugungwa, nzvimbo ino haisi nzvimbo yekuungana chete yekutengeserana kwevanhu asiwo inzvimbo inokwezva tsika ine maitiro ekumadokero kwerwizi. Vashanyi vanoshanyira nzvimbo iyi havangoona mamiriro emusika chete asiwo maratidziro akasarudzika edunhu rerwizi uko kunogara vanhu kuno kunoenderana nekukwira nekudonha kwemvura murwizi.
Tra PaMusika Inoyangarara
14. My Thuan Bridge – Vinh Long Sightseeing Place
My Thuan Bridge ibhiriji riri mudunhu reVinh Long. Bhiriji rinoyambuka Rwizi rweTien uye rinobatanidza matunhu maviri eTien Giang neVinh Long. Bhiriji iri riri paNational Highway 1A, 125km maodzanyemba akadziva kumadokero kweHo Chi Minh Guta. My Thuan Bridge ibhiriji rakakosha muNational Highway 1A axis kumatunhu ekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero. Iri ndiro bhiriji rekutanga rakagara netambo munyika yedu.
>>> Tarisa ikozvino: Yepamusoro 27 Inokwezva Yakareba Yekushanya Inokwezva Haafanirwe Kupotsa
15. Tembere yeMabhuku – Vinh Long Spiritual Tourist Site
Nezve Vinh Long Tembere yeMabhuku, vashanyi vane mukana wekudzidza chikamu chetsika yenyika uye nhoroondo kuti vawedzere maonero avo. Admire chivakwa chekare uye dada nemaoko ane tarenda emadzitateguru. Nyura munzvimbo inotapira nemweya wakajeka wedenga nenyika kuti uzorore. Rwendo rupfupi rwakadaro asi rwakazadzwa nendangariro dzakawanda dzinonakidza, wadii kurangarira, kwete rudo. Kana iwe ukadzokera kuVinh Long, usakanganwe kushanyira Tembere yeMabhuku kuti uwane zvisingakanganwike ‘zvakavanzika’ zvenzvimbo ino, shamwari!
16. Vinh Long imba yekare ecological nzvimbo
Ecological nzvimbo yeVinh Long imba yekare inzvimbo inobatsira yevashanyi, kunyanya vagari vemumaguta vanoziva dzimba dzakachengetwa. Kuuya pano, vashanyi vachakwanisa kugara mumhepo yakavhurika yezvisikwa, denga nenyika, uye kuve nenguva yakakosha nehama nemhuri.
Vinh Yakareba Imba Yechinyakare Ecological Area
17. An Binh Island – Vinh Long Nzvimbo yekuenda
An Binh islet ndeimwe yeanoyevedza eco-tourism nzvimbo dzeVinh Long mudunhu. Nevhu rakaorera uye rakapfuma, iyi ndiyo munda mukuru muVinh Long: rambutan, mango, custard-apple, durian, sapoche … Pakuuya pano, vashanyi vanogona kuwana zvimwe zvakawanda zvinonakidza zvinhu. Iyi inzvimbo yekushanya muVinh Long iyo isingafanirwe kupotsa!
18. Truong Huy nzvimbo yevashanyi
Truong Huy nharaunda yevashanyi inodada kuve inosimudzira kuMadokero neakasiyana masevhisi: varaidzo, maresitorendi, mahotera. Kana vachiuya pano, vashanyi vanogona kuongorora vakasununguka zvakasiyana-siyana zvezviitiko. Iyi Vinh Long nzvimbo yekushanya iri kukwezva nhamba huru yevashanyi.
Truong Huy KDL
>>>> Tarisa Iyezvino: Vepamusoro makumi matatu Ninh Thuan Nzvimbo dzeVashanyi Dzinoita Kuti Vechidiki Vamire Zvakadaro
19. Yakareba An Ancient Pagoda – Vinh Long Tourist Site
Pakati pavo pane Long An pagoda yekare, inozivikanwawo seDong De pagoda. Yakareba An Pagoda inopfuura 3km kubva pakati peTra On dhorobha, kubva Highway 54 uchitevedza mugwagwa mudiki ungangoita 500m kuenda kunzvimbo. Sekureva kwevakuru, angangoita mazana maviri emakore apfuura, nzvimbo iyi yaive ichiri dongo, isina kurongeka zvakanyanya. Kukura masango mazhinji emusango, vanhu vashoma kwazvo vanogara pano. Mumakore ekuma1860, mumongi kubva mudunhu reNgu Quang akauya kuzosarudza nzvimbo iyi senzvimbo yekumira kuti adzidzire. Ipapo yakadzoserwa nyika, yakamisa temberi uye kuburikidza nezvizvarwa zvakawanda zvemaabbots, nguva zhinji dzekurima mukaka, vakawana temberi sezvazviri nhasi.
Tembere Yakare Yakareba
>>> Ona zvimwe: Apk 19 Vo Nguyen Giap Street Hotels Da Nang Pedyo neGungwa
20. Tien Chau Pagoda – Vinh Long Spiritual Tourism
Tien Chau Pagoda inonzi zviri pamutemo Di Da Tu kana To Chau Pagoda. Inonzi Di Da Tu nekuti tembere inonamata Amitabha Buddha – Mukuru wePatriarch weWestern Paradhiso. Inonzi zvakare To Chau pagoda nekuti musha weBinh Luong (zvino wava Binh Luong hamlet, uko kune temberi) waimbove nemiti yemikonachando inokanda mimvuri parwizi rwakadzikama, inoyevedza uye yenhetembo, inoyeuchidza nyika yeTo Chau. – China. Kana iwe uine mukana wekuuya kuVinh Long, haufanirwe kupotsa rwendo rwekuona nzvimbo yeTien Chau Pagoda. Kuti ukwanise kuwana nzvimbo ine rugare, bvisa kuneta kwese uye kunetseka kwehupenyu. Uye tsvaga kunaka kwetsika nemagariro pano.
21. Long Thanh Communal House – Nzvimbo Yekushanyira Vinh Long
Long Thanh communal house, inozivikanwawo seLong Thanh martial arts temberi, parizvino iri mu cluster 4, wadhi 5, Vinh Long guta. Anenge makiromita matatu kubva pakati peguta, pamahombekombe eLong Ho River, anenge 500 metres kubva kuOng Me Bridge, kune yakanaka uye ine airy landscaped campus. Iyi zvakare inzvimbo yekushanya muVinh Long iyo isingafanirwe kupotsa!
Ratidza chinyorwa ichi
READ Top 4 quán ốc Phạm Ngọc Thạch giá rẻ, chất lượng cho team mê ốc | Excitinghochiminhcity
← Thịt nạc vai làm món gì ngon? 5 món từ thịt nạc vai | Excitinghochiminhcity
Cách trồng cây hương thảo – Cho hoa thơm mát quanh nhà | Excitinghochiminhcity →